အိမ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် မပါမဖြစ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ရေတိုင်ကီများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။ BEST STAR PE WATER TANK CO.,LTD မှ ထုတ်လုပ်သော အရေအသွေးမြင့် ကုန်ကြမ်းများဖြင့် ရေတိုင်ကီများကို လူကြီးမင်းများ စိတ်ကြိုက် အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ မှာယူနိုင်ပါသည်။ တစ်ထပ်အိမ်များ အတွက်အပြင်တွင် အမြင့်ခုံဆောက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မည့် ဘူးရှည်ပုံစံ ဒီဇိုင်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
BEST STAR PE WATER TANK CO.,LTD မှ ထုတ်လုပ်သော အရေအသွေးမြင့် ကုန်ကြမ်းများဖြင့် ရေတိုင်ကီများကို လူကြီးမင်းများ စိတ်ကြိုက် အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ မှာယူနိုင်ပါသည်။ အိမ်သုံးရေတိုင်ကီများကို နေအိမ်အတွင်း ထည့်ပြီအသုံးပြုနိုင်အောင် အနိမ့်ပုံစံဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှဝန်ဆောင်မှုများအနေဖြင့် 1. BEST STAR WATER TANK များကိုဝယ်ယူအားပေးသည့်CUSTOMER များကိုရန်ကုန်မြို့တွင်း၌ အိမ် စက်ရုံ/ အလုပ်ရုံ / အရောက် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ 2. နယ် CUSTOMER များအတွက် ကားဂိတ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ 3.CUSTOMER များစိတ်တိုင်းကျအသုံးပြုလိုသော ရေ၀င်၊ရေထွက်၊ရေလျှံ ပေါက်များကိုစနစ်တကျဖောက် လုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ 4.ဖောက်ပြီးသောရေ၀င် ၊ရေထွက်၊ရေလျှံပေါက်များ၌ ခိုင်မာသော(SOCKET)များတပ်ဆင်ပေးပါသည်။
34000 ~ 41000 Kyats
It is very appropriate for using in food and beverages raw material spacing and garments. It is made up of PP and one way trip.
353100 ~ 372000 Kyats
Internal Loading 400kg ဖြစ်သောကြာင့်ပေါ့ပါးပြီးမာကြောသောတွန်းလှည်းအမျီုးအစားဖြစ်သည်။ ပလတ်စတစ်အသားကိုမာကြောအောင်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများအသုံးပြုထားခြင်းမရှိပဲ ပလတ်စတစ်ကော်စေ့များကိုသာအသုံးပြုထားသောကြောင့် စားသောက်ကုန်များထည့်သွင်းရာတွင် လုံခြုံမှုအပြည့်ရှိစေပါသည်။ လှည်း၏အောက်ခြေတွင် ရေထွက်ပေါက် အပေါက်သေးနှစ်ပေါက်ပါရှိသောကြောင့် ဆေးကြောရာတွင်လွယ်ကူစေပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ... ၀၉-၄၂၀၀၅၄၂၉၁၊ ၀၉-၉၇၃၇၉၂၀၂၁ စည်သူနိုင် MFPG Korea Plastic